သတင်း - အပူလွှဲပြောင်းစာရွက်၏ Warpage နှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
Transfer paper သည် coated paper တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဖုံးအုပ်ထားသောအလွှာ၏ ချဲ့ထွင်မှုနှုန်းနှင့် နောက်ခံစက္ကူသည် ခြောက်သွေ့ပြီး မြင့်မားသော အပူချိန်အောက်တွင် တစ်သမတ်တည်းမဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည် တစ်ဖက်သတ်စစ်ပွဲကို ဖြစ်စေသည်။ ငွေလွှဲစာရွက်ပြောင်းသွားသောအခါတွင် အောက်ပါအဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်စေသည်-
1. ပရင်တာသည် စက္ကူကို ကျွေးရန် အဆင်မပြေပါ (အခန်းအပူချိန် အခြောက်ခံခြင်း (warpage)
2. စာရွက်များကို အမြောက်အမြား ပုံနှိပ်ပြီး စုပုံထားသောအခါ၊ warpage ကြောင့် စီစဉ်မှု အဆင်မပြေပါ (အခန်းအပူချိန် ခြောက်သွေ့ခြင်း (warpage)၊
3. အပူမပြောင်းမီပုံနှိပ်ခြင်းမပြုမီ၊ လွှဲပြောင်းစက္ကူ၏ warpage ကြောင့်၊ လွှဲပြောင်းစာရွက်နှင့် အထည်၏ ချိန်ညှိမှုသည် တိကျမှုမရှိသောကြောင့် လွှဲပြောင်းမှုပျက်ကွက်ခြင်း (အခန်းအပူချိန်ခြောက်သွေ့ခြင်း (warpage))၊
4. အပူလွှဲပြောင်းပုံနှိပ်ခြင်း၏ပူသောပန်းကန်အောက်တွင်၊ လွှဲပြောင်းစာရွက်၏ warpage သည် လွှဲပြောင်းမှုရွေ့လျားမှုကိုဖြစ်စေပြီး လွှဲပြောင်းမှုပျက်ကွက်မှုဖြစ်စေသည် (အပူချိန်မြင့်မားသောစစ်ပွဲ)
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ငွေလွှဲစက္ကူစက်ရုံ အသီးသီးမှ ထုတ်လုပ်သော ထုတ်ကုန်များသည် ကွဲပြားသော စစ်ပွဲအဆင့်များ ရှိသည်။ ကောင်းမွန်သော လွှဲပြောင်းစက္ကူတွင် သေးငယ်သော warpage angle နှင့် နှေးကွေးသော warpage ပါရှိပြီး ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ချောမွေ့မှုနှင့် အချိန်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
warpage ကို ကျော်လွှားရန် လွှဲပြောင်းသည့် စက္ကူထုတ်လုပ်သူများအတွက် ခက်ခဲသော ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ထပ် coating နည်းလမ်းသည် warpage ကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးစေသည်။ ပြည်တွင်းငွေလွှဲစက္ကူထုတ်လုပ်သည့်ကိရိယာအများစုသည် ထိုသို့သောအခြေအနေများမရှိသောကြောင့် အပေါ်ယံဖော်မြူလာနှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှသာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Inkjet Transfer Paper သည် အရေးအကြောင်းသေးငယ်လေ၊ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်နေစဉ်အတွင်း အရေးအကြောင်းများ ပြင်းထန်ပါက၊ အထူးသဖြင့် စက္ကူမျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှုသည် ကြီးမားသောအခါတွင် စက္ကူသည် ခုံးပြီး နော်ဇယ်ကို ပွတ်တိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့သော နော်ဇယ်ကို ပျက်စီးစေရန် အလားအလာ ပိုများသည် (အချို့သော လုပ်ငန်းများသည် အပေါ်ယံဖွဲ့စည်းမှုတွင် အကြမ်းဖျင်းသော အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများ ထည့်ထားခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် ငွေလွှဲစက္ကူကို သဲစက္ကူကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်း)။ ငွေလွှဲစက္ကူတွန့်ခြင်းကို လျှော့ချရန် အဓိကနည်းလမ်းမှာ အခြေခံစက္ကူမှ စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေခံစက္ကူတွန့်က သေးငယ်သောအခါ၊ အပေါ်ယံနှင့် ပုံနှိပ်စက်တွန့်သည် သေးငယ်သွားလိမ့်မည်။ ဒုတိယအချက်မှာ အရေးအကြောင်းများကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အပေါ်ယံပုံသေနည်းကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
လွှဲပြောင်းစက္ကူ၏ အပေါ်ယံဖော်မြူလာသည် နာနိုပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၊ လွှဲပြောင်းစက္ကူမျက်နှာပြင်၏ ချောမွေ့မှုကို3စက္ကန့်ထက်ပိုကြာစေပြီး နော်ဇယ်ကို ပျက်စီးစေမည်မဟုတ်ပေ။
ငွေလွှဲစာရွက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အစက်အပြောက် ( impurity spot ) သည် ငွေလွှဲစာရွက်၏ အရေးကြီးသော အညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအစက်အပြောက်များကို အခြေခံစက္ကူ၊ အပေါ်ယံပိုင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အစက်အပြောက်သည် အစိုင်အခဲအရောင်ပုံနှိပ်ခြင်း၏ ကြီးမားသော အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော်လည်း ဖန်စီပုံနှိပ်ခြင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ပြည်တွင်းငွေလွှဲစာတမ်းတွင် အစက်အပြောက်ပြဿနာသည် အဖြစ်များသည်။ Suzhou Quanjia ကုမ္ပဏီသည် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် သုတေသနများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နေရာကို မျိုးဆက်နှင့် ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းများကို ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ အခြေခံစက္ကူမှအစ အပေါ်ယံဖော်မြူလာအထိ တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ တွင် တစ်စတုရန်းမီတာလျှင် အစက်အပြောက် 1-2 ကွက်အထိ ရှိနိုင်သော်လည်း ဖော်မြူလာအသစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စက်ကိရိယာများ အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့် အစက်အပြောက်များကို ဖယ်ရှားပြီး ရောက်ရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ။
အရည်အသွေးတည်ငြိမ်မှုသည် အသုံးဝင်မှု၏ အရေးကြီးသော ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွှဲပြောင်းစာရွက်၏ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးသည် အသုံးပြုသူ၏ မှင်၊ ပရင့်ဒေတာဆက်တင်နှင့် လွှဲပြောင်းသည့်စက်ပါရာမီတာဆက်တင်တို့နှင့် အနီးကပ်ဆက်စပ်နေသည်။ လွှဲပြောင်းစာရွက်၏ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေး၏ အတက်အကျ သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲခြင်းသည် သုံးစွဲသူအား ချိန်ညှိချက်ကို လိုက်နာရန် တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မူရင်းအရောင်ချိန်ညှိခြင်းကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်၊ ဝယ်ယူသူများအား ပေးအပ်ထားသော မူရင်းပုံနှိပ်နမူနာများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်၍မရသော်လည်း ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖောက်သည်များသည် တည်ငြိမ်သော အရည်အသွေး လိုအပ်သည်။ တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးကသာ သစ္စာရှိဖောက်သည်အများအပြားကို အနိုင်ယူနိုင်သောကြောင့် လွှဲပြောင်းစက္ကူထုတ်လုပ်သူများသည် ဤကိစ္စကို ကြီးကြီးမားမားအလေးထားရမည်ဖြစ်သည်။